Chinja Kuverenga Kuite Hobby | Karman® Mawiricheya
Dzorera Kuverenga Kuita Hobby
Posted on December 11, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Kuverenga Kwakakukodzera Here?
Nguva nenguva tinowanzo neta nekutarisa kwedu skrini yefoni kana kunyange computer screen. Kana izvozvo zvikaitika uye iwe wotanga kuuraya musoro wemhondi ipapo unotanga kuona kuti unoda imwe nguva yekuzorodza chiono chako. Kuverenga kunouya kunobatsira kana izvozvo zvikatanga kuitika nekuti haufanire kunge uchitarisa pachiratidziro kunze kwekunge iwe waverenga manhamba. Kune nzira dzakawanda iwe dzaunogona kuenda nezvekuverenga kuti unakirwe kana kuverenga kuti ingo dzidza kuverengera pane imwe nhaurwa. Kuverenga zvese zvinongobatsira iwe uye iwe unofanirwa kuzvishandura kuita hobby. Muchikamu chino, tichaenda pamusoro pemamwe matipi ekukubatsira iwe kutanga. Vamwe zvinobatsira izvo zvinozivikanwa sanganisira, kubatsira iwe kuzorora, kunobatsira kurara, kunowedzera huchenjeri, uye zvimwe zvakawanda!
Rudzi yemabhuku aunofanira kuverenga
Zvibvunze kuti chii mhando yemabhuku iwe unonyanya kufarira nekuti kana usiri mukati mebhuku saka hauchazoda kuramba uchirava. Zano rakakura ibhuku rekunyepedzera nekuti richakuchengeta iwe pamucheto weako wiricheya uye kuve uchiverenga iwe kusvika kumagumo. Kana iwe uchida chiito mabhaisikopo uye iyo mhando yezvinhu saka ehe edza fikisi mabhuku. Kana izvozvo mhando yemhando inosvira iwe kurufu ingo namatira kune isiri-ngano. Kuzvisimudzira mabhuku zvakare sarudzo yakanaka nekuti haingokukurudzire iwe chete asizve inozomutsa chimwe chinhu mumusoro mako chinotungamira mukugadzirwa uye chichava domasi mhedzisiro.
Kwokutenga mabhuku ako
Pane huwandu hwakanaka hwezvitoro zvemabhuku zvaunofanirwa kuve nazvo munharaunda medu. Kana iwe usingakwanise kuwana chitoro chemunharaunda kupfuura iwe chaunogona zvakare kuyedza online. Kunobva kune mukurumbira sosi ndeye Barnes naNoble, vane webhusaiti yaunogona kushanyira nekutsvaga zviuru zvemabhuku nezvimwe zvekuverenga kana uchizvida. Dzimwe nguva chitoro chinopa kutumira kwemahara kwevatengi vekutanga uye mutengo wakaderedzwa wekutanga-wenguva kutenga zvakare. Amazon zvakare inzvimbo yakanaka kwazvo yaunogona kutenga mabhuku pamhepo uye vane huwandu hwakawanda hwemabhuku aunogona kusarudza kubva. With Amazon, iwe unogona kusarudza kubva kune dzakasiyana nyeredzi ratings uye mitengo yemakero izvo zvinobatsira kwazvo kudzikisira kutsvaga kwako. Kana iwe uchinzwa online hakusi kwako iwe ingo enda kune akasiyana garaji kutengesa kumaweekend. Iwe haugone kuwana akawanda marudzi asi iwe zvechokwadi uchawana akanaka kwazvo madhiri. Kutsvaga mabhuku pakutengesa kwegaraji ndekwe mumwe munhu asiri wekusarudza nezve mabhuku ivo vangoda kutanga kare.
Paunenge uchinge uine mabhuku ako iwe unofanirwa kufunga kuve nesherufu yemabhuku nekuti raibhurari yako inokura kana yangoshanduka kuita yekujaira. Tsvaga imba isina ruzha kana chingoridza mimhanzi nyoro mumashure kuti ugone kutarisa mubhuku. Kana riri bhuku uri kushandisa kudzidza kubva ipapo kutanga kutora zvinyorwa uye pfupiso mushure mechitsauko chese. Zvitorere zvako zvekunwa uye tarisa pane rimwe bhuku panguva kuitira kuti usazonzwa sekunge uri kwese kwese.
Kutora mifananidzo muWheelchair
Kuwana Ink Tattoo Kune Vashandisi Vemagumbo eWiricheya